८ कक्षामा पढ्ने १२ बर्षीय कि’शोरीको जीवनत्या’गको यस्तो का’रण खु’ल्दा सबैको होस उ’ड्यो ! – Aaj ko Sandesh
हिमानीको यी तस्बिर जो बन्यो सामाजिक संजाल मा भाइरल (भिडियो सहित)
मोरंग प्रहरीले भन्यो ,पोस्ट-मार्टम र भिसेरा परिक्षन रिपोर्टले ३१ वर्षीय प्रविण बास्तोलाको ह-त्या भएको हो ,..भिडियो हेर्नुहोस्
आकास श्रेष्ठले किन हाले त पुजाको सिउदोमा सिन्दुर। के बिहे गरेकै हुन त हेर्नुहोस भिडियो
जेठी श्रीमती हुदा हुदै कान्छी ल्याएपछी जे भयो …
घर भित्र बाट बा*घले मान्छे खा*एपछि तेह्रथुममा त*नाव ग्रस्त तुरुन्तै हेर्नुस् (भिडियो हेर्नुहोस्)
ट्या’क्टर दु’र्घटना हुँदा १९ वर्षीय सञ्जिव को घ’ट्नास्थलमै मृ’त्यु
मुख्य पृष्ठ /News/८ कक्षामा पढ्ने १२ बर्षीय कि’शोरीको जीवनत्या’गको यस्तो का’रण खु’ल्दा सबैको होस उ’ड्यो !
८ कक्षामा पढ्ने १२ बर्षीय कि’शोरीको जीवनत्या’गको यस्तो का’रण खु’ल्दा सबैको होस उ’ड्यो !
८ कक्षामा पढ्ने १२ बर्षीय कि’शोरीको जीवनत्या’गको का’रण खु’ल्दा सबैको होस उ’ड्यो एजेन्सी – भारतमा कक्षा आठमा पढ्ने छा त्राले जीवनत्या ग गरेकी छिन् । छिमेकी छा त्रलाई आफ्नो मृ त्युको का रण बता उँदै उनले जीवनत्या ग गरेकी हुन् । हरियाणा राज्यको फरीदाबादको बल्लभगढमा आठ कक्षामा अध्ययनरत १२ वर्षीया विद्यार्थीले मंगलबार साँझ फ्यानको सहयोगमा जीवनत्या ग गरेकी हुन् । पुलिसले घ टना स्थलबाट एक नोट पनि बरामद गरेको छ। जसमा उनले आफ्नो छिमेकामा बसिरहेको १६ वर्षीय केटा विद्यार्थीलाई मृ त्युको लागि जिम्मेवार बताएकी छिन्
मंगलबार साँझ, युवतीको ला श घरमा फ्या नसँगै फे ला परेको थियो । उनले सवल लगाएर जीवनत्या ग गरेकी छिन् । जानकारी अनुसार आमा क म्पनीमा काम गर्न गएकी थिइन् । बुबा तरकारी बेच्न घरबाट बाहिर निस्केका थिए । मंगलबार साँझ सवा ८ बजे केटीको बुबा घरमा पुग्दा छोरीलाई फ्या नमा मृ त अवस्था मा भे ट्टाएका हुन् । घट नाको बारेमा जान कारी पाए पछि प्रह रीले घ टनास्थलमा पुगे र ला श नि यन्त्रणमा लिएर ला श परीक्षणको लागि पठाएको छ । – गुगलबाट साभार फाइल तस्बिर
प्रहरीले घ टना स्थलबाट एक नोट पनि ब रामद गरेको छ । अनुसन्धान अधि कृत पन्ना लालले नो टमा वि द्यार्थीले छिमेकी किशो रलाई जि म्मेवार भएको उ ल्लेख गरेको ब ताएका छन् । नोटमा लेखिएको छ, ‘छिमेकी विद्यार्थी मेरो मृ त्युको लागि जिम्मेवार छन् । म उसलाई मा या गर्थें जबकि ऊ अर्को केटीसँग प्रेम गर्दै थियो । उस्ले मलाई धो का दिएको छ, यसै ले मैले आ फ्नो जी वन दिएकी छु ।’ नेटमा उनले आमा–बुबा मलाई माफ गर्नुहोला पनि भनेकी छिन् । ला श परीक्षणपछि प्रहरीले मृ तकको ला श उनका आ फन्तहरूलाई ह स्तान्तरण गरिसकेको छ र अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।-एजेन्सीको सहयोगमा
Breaking…कुलमान घिसिङवि’रुद्ध पर्यो मु’द्दा, अदालतमा हाजिर हुन् आदेश
नाकको डण्डीफोर निचोर्दा अनुहार सुन्निएर बेलून जस्तो